राजधानीका सडक बेहाल | Samacharpati.com – A Complete News Portal From Pokhara Nepal
राजधानीका सडक बेहाल
प्रकाशित मिति: 2074 श्रावण7शनिबार(July 22, 2017) 12:47 PM बजे Posted By: Narayan Bhattarai
समाचारपाटि, ०७ असार – चाबहिल–साँखु सडक खण्डको एकातिर पानी जमेर हिलाम्मे भएको छ, अर्कोतिर यात्रुहरू धूलोले नाक छोप्न बाध्य छन्। चावहिल–जोरपाटी सडकका खाल्डाखुल्डीले उक्त क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने पैदलयात्री र सवारी साधनलाई कठिनाइ भएको छ।
वर्षा र ढलका कारणले गर्दा उक्त सडकका खाल्डामा अहिले पानी जमेको छ भने दिनहुँ प्रहरी अगाडि २/३ वटा दुर्घटना आउने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृत्तका सइ हरि भट्टराई बताउँछन्। उनले भने, ‘बौद्धदेखि साँखुसम्मकै सडकको हविगत त्यस्तै छ। दिनहुँ प्रहरीले नै सहयोग गर्नुपर्ने गरी दुर्घटना भइरहन्छन्।’ प्राय: मोटरसाइकल, स्कुटर दुर्घटनाको सिकार हुन्छन्। ठूला, मानवीय क्षति हुने प्रकृतिका नभए पनि स–साना दुर्घटना दिनहुँजसो भइरहन्छन्।
स्थानीय उदयबहादुर लिम्बू भने दुर्घटनाको संख्या यसभन्दा निकै बढी रहेको बताउँछन्। चुच्चेपाटीमा पासाङ ल्हामुको शालिक अगाडि घुमाउनुपर्ने बाटो भएकाले दुर्घटनाको संख्या उच्च रहेको उनको भनाइ छ। अपांग महासंघका सदस्य रहेका उनले भने, ‘हामीजस्ता स्कुटर चलाउनेलाई झनै उपत्यकाका सडकले दिएको सास्ती बयान गर्न सकिन्न। पानी परेको दिनमा यो स्थानमा १० भन्दा बढी दुई पांग्रे चिप्लिने, लड्ने हुन्छ।’
लिम्बूले काठमाडौंका सडकले अपांगलाई घरमै रहन बाध्य बनाएको बताए। आफैंले कुनै काम गर्न बाहिर निस्कन भौतिक संरचना राम्रो नभइदिँदा परनिर्भर हुनुपरेको अपांगहरूको भनाइ छ। महासंघका सदस्य लिम्बूले भने, ‘ट्याक्सीमा आवतजावत गर्दा महँगो पर्छ, आफंैले हिँडडुल गर्न दृष्टिविहीन, अपांगहरूलाई गाह्रो भएकाले कोठामै सीमित हुनुपरेको छ।’
उक्त चोकमा शालिकको ढोकैमा मेलम्चीले जमिन खनेकाले निर्माण सामग्री पनि थुपारिएको छ। ‘बेलुका बनाउने भन्छन् तर दुई महिना हुन आँट्यो अझसम्म यो खाल्डो निर्माण सकिएको छैन,’ एक पसलेले भनिन्। बेलुका निर्माण गर्ने भनेर काम गरेको जस्तो देखिए पनि भौतिक प्रगति शून्यझैं देखिएको स्थानीय गुनासो गर्छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ कै सरस्वती नगरमा पनि सडकको खाल्डाखुल्डीले दिनहुँ स–साना दुर्घटना भइरहेको हुन्छ। असारको अन्तिम दिन बौद्धिक नगरअगाडिको खाल्डोमा राति राँगो खसेपछि बिहान मृत राँगोलाई निकालेर खाल्डो पुरिएको थियो। घटना हुनुभन्दा हप्ता दिनभन्दा अघिदेखि उक्त खाल्डो खुलै थियो।
स्थानीय पसलेले भने, ‘अर्को खाल्डो पनि ढल सफा गर्ने भनेर खुलै राखेको छ। एकपल्टमा एउटा मात्र गाडी आउन वा जान सक्नेगरी सडक छ। यस सडकमा पनि मोटरसाइकल दुर्घटना त सामान्य भइसक्यो।’ केही कारणले सडकमा खाल्डो खन्ने गरे पनि पुर्न र निर्माण गर्न निकै समय लिने गरेको उपत्यकावासीको भनाइ छ। खाल्डो पुर्न तत्परता नदेखाउँदा राजधानीमा दुर्घटना बढिरहेका छन्।
ट्राफिक प्रहरी वृत्त बौद्धका सई भट्टराईले खाल्डाखुल्डीका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बताए। ‘मोटरसाइकल, स्कुटर भासिने, ठोक्किने, चिप्लिनेजस्ता घटना बारम्बार भइरहन्छन्। ग्राभेल हाले पनि सडकमा सवारी चाप निकै रहेकाले टिक्दैनन्,’ भट्टराईले भने।
राजधानीका विभिन्न ठाउँमा खराब सडक र खाल्डाखुल्डीले सवारी साधन चलाउने, पैदल यात्री र ट्राफिक प्रहरी तीनैलाई खतरा छ। ट्राफिक प्रहरी वृत्त कोटेश्वरका प्रहरी निरीक्षक हर्कबहादुर रावलले भने, ‘मेलम्चीको पाइप जडान गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन्। भित्री सडकको अवस्था झनै नाजुक छ। मृत्यु नै हुनेगरी ठूला घटना नभए पनि स–साना घटना दिनहुँ भइरहन्छन्।’
भक्तपुर र काठमाडौं जोड्ने जडिबुटीको पुल नजिक पूर्वतिर आउने बाटोमा पानीको पाइप फुटदा मर्मत गरेर पुरियो। तर अहिले गाडी गुड्ने स्थिति नभएको स्थानीय बताउँछन्। मुनिभैरवमा पनि दुई खाल्डा थिए, पुरिएर ग्राभेल गरिए पनि गाडी त्यो स्थानको दायाँबाया गुड्छन्। बानेश्वरबाट तीनकुने जाने सडकमा पनि पुल भत्किएपछि त्यहाँ दुर्घटनाको उच्च जोखिम छ। प्रहरी निरीक्षक रावलले भने, ‘चार लेनको सडकमा एकलेन मात्र हुन्छ त्यहाँ।’
गौशाला पनि मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने कार्यबाट प्रभावित स्थानमध्ये एक हो। लामो समयसम्म पाइप बिछ्याउने कार्य भइरह्यो। धूलो र हिलोले पनि सडक नराम्रो बनायो। अहिले पनि च्याम्बर राख्न गौशाला चोकमै खाल्डो खनिएको छ। ‘तर छेकिएकाले दुर्घटनाको सम्भावना कम छ,’ गौशाला ट्राफिक प्रहरी वृत्तका सागर बोहराले भने, ‘ढल व्यवस्थित नभएकाले पनि पानी पर्दा सडकमै पानी जम्छ।’ मैजुबहाल जाने सडकमा मारूती भ्यान, निलो ट्याक्सी, मोटरसाइकलजस्ता साना सवारीको स्टार्ट बन्द हुने, नचल्ने हुने उनले बताए।
दरबारमार्गका प्रहरी निरीक्षक सुनीलजंग शाही पनि खाल्डाखुल्डीले समस्या ल्याएको स्वीकार्छन्। ‘लाजिम्पाटको सडकमा खाल्डो थियो, आज पुरियो,’ शाहीले भने, ‘तत्कालका लागि गिट्टी हालेर छाडिएको छ। पानी पर्दा फेरि त्यो सडक त्यस्तै हुनेछ।’ प्राय: दुर्घटना सवारी चालकले हिलो र खाल्डो छल्न खोज्दा हुने गरेको उनको अनुभव छ।
चिउरा चपाउँदा बंगरा दुखिसक्यो सरकार ! बाढी
वास्तविक तिजको गित यस्तो हुनुपर्छ ! सुन्ने
उम्लिरहेको तातो तेलमा बुद्ध शिष्यले यसरि ध्यान
आमाले छाडेर पोइला गएपछि छोराछोरीको यस्तो बिचल्ली, भन्छन – पढ्न चाहन्छौ, तर पढाइदिने कसले ?
चिउरा चपाउँदा बंगरा दुखिसक्यो सरकार ! बाढी पिडितको यस्तो छ अबस्था हेर्नुहोस
कुनै नेपाली दिदि बहिनीलाई मलाइ जस्तो नपरोस, सीमा विवादले कसैको सिन्दूर नपुछियोस्
विदेशीएकी चेली नाबालक छोरासंग छुट्टिनुको पिडा तिजको गितमा यसरी सुनाउछिन्
वास्तविक तिजको गित यस्तो हुनुपर्छ ! सुन्ने कसैका आँसु थामिएनन् >> लाइभ भिडियो